Iindaba-Ukungenelela noMsunguli weNaturepoly uLuna malunga ne-PLA Straw yethu
Ngenelela noMsunguli weNaturepoly uLuna malunga ne-PLA Straw yethu
Q1: Yintoni iPLA?
I-Luna: i-PLA imele i-Polylactic Acid. Yenziwe, phantsi kweemeko ezilawulwayo ezivela kwizityalo ezivundisiweyo ezifana nesitatshi sengqolowa, icassava, iswekile kunye nesweet beet pulp. Iyabonakala kwaye inzima.
I-Q2: Ngaba iimveliso zakho zingenziwa ngokwezifiso?
Luna: ewe. Sinikezela ngeemveliso ezenzelwe wena, ezinje ngokushicilela ilogo, uyilo lwegraphic kunye neeslogans kwi-straw, imisonto enemibala ehambelana nombala we-pantone ochazwe ngumthengi. Kukwakho nohlobo oluphuculweyo lwendiza yePLA yokuqinisekisa ukuba banokungena kwifilimu egubungele iikomityi ezilahlwayo, ezenzelwe ngokukodwa abathengi bethu bevenkile yeti.
I-Q3: Inokusetyenziswa phi iindiza zePLA?
I-Luna: Iivenkile zeti ye-bubble, iivenkile zokwenza ikofu, imivalo, iiklabhu, ukuthintela, ekhaya nakwiitheko.
I-Q4: Iistro ezinokuboliswa ziintsholongwane zenza imbali, njengoko umhlaba ushenxa kwiplastikhi enye yokusebenzisa (i-SUP). Zeziphi ezinye iindlela ezintsha ze-SUP osigcinele zona?
Luna: Ukuncitshiswa kokusebenzisa iiplastikhi kwiivenkile zokutyela nakwindlu yeti akwanele. Siye sabona imfuno yezisombululo ze-eco-friendly kwicandelo lezinto ezinomququ, njengama-straw amile okwe-U kunye neeteleskopu encanyathiselwe kwijusi yabantwana nakwiibhokisi zobisi.
Oko kwakuthetha ukoyisa imiceli mngeni yokuvelisa ubungakanani obuncinci be-intshi ezingama-0.29 / 7.5 iimilimitha kunye nokuphuhlisa iresiphi ye-PLA ephucukileyo yeendiza ezomeleleyo ezinokuthi zihlabe itywina lebhokisi yesiselo. Ngaphandle koko, siphakathi kwabavelisi bokuqala kwihlabathi ababonelela ngobushushu be-PLA straws. Iindiza zethu zinokumelana namaqondo obushushu ukuya kuthi ga kuma-80 ° Celsius.
I-Q5: Kuthatha ixesha elingakanani umququ ukuthoba isidima?
I-Luna: Ukwahlulahlulahlulahlula kunye nokuxinana kweemveliso zethu kudlulisile kuvavanyo olwenziwe yi-TUV Austria, Bureau Vitas kunye ne-FDA. Kwimizi-mveliso yokwenza umgquba, umququ uphela uphele kwiintsuku ezili-180.
Kwimeko yokufaka umgquba ekhaya, ingca yePLA ithoba ngokupheleleyo malunga neminyaka emi-2. (Umgquba onenkunkuma yasekhitshini).
Kwimeko-bume yendalo, iindiza zithatha malunga neminyaka emi-3 ukuya kwesi-5 ukuthotywa ngokupheleleyo.
I-Q6: Ubushushu obunokubuyela kwakhona njani kwi-PLA straw?
I-Luna: Elonaqondo lobushushu liphezulu le-PLA yi-80 ° Celsius.